Waxaa dhaqangalay go’aankii ay Maraykanka iyo Britain laabtoobyada iyo tablet-yada kaga mamnuuceen in lagu isticmaalo gudaha diyaaradaha kaga imaanaya Turkiga iyo dalal kale oo Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika ku yaalla.
Saraakiil ayaa sheegay “in wixii ka wayn taleefanada caaqilka ah” ay waajibtahay in la galiyo qaybta boorsooyinka waawayn la galiyo oo dadku aysan gudaha ula galin diyaaradda, sababta ayayna ku sheegeen in ay sare u kacday in halista ah in waxyaabaha qarxa lagu qarinkaro.
Sagaal shirkado diyaaradeed oo laga leeyahay siddeed dal oo kala ah Turkiga, Marooko, Jordan, Masar, Isutagga Imaaraaadka Carabta, Qadar, Sacuudi Carabiya, iyo Kuwayd ayuu saameeyay go’aankan Maraykanka. Konton duulimaad ayay diyaaradahaasi ku tagaan Maraykanka maalinkaste.
March 25, 2017, 2:08 pm
Madaxda IGAD oo ka shiraya xal u helidda qaxootiga Soomaalida
Madaxda dalalka xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD ayaa maanta magaalada Nairobi ku leh kulan gaar ah oo ay uga arrinsanayaan sidii xal waaro loogu heli lahaa qaxootiga Soomaalida.
In ka badan 2 milyan oo Soomaali ah ayaa ku barakacsan gudaha dalalka bariga Afrika. 1.1 milyan oo ka mid ah barakacayaashaasi waxay ku suagn yihiin gudaha Soomaaliya, sida ay sheegtay hay’adda Qaramaa Midoobay u qaabilsan Qaxootiga.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ugu horraysay tan iyo markii la doortay fursad u heli doona in uu la kulmo hoggaamiyaasha dalalka IGAD oo afar ka mid ah ciidammadooda ay ka howlgalaan Soomaaliya. Dalalkaasi waxay kala yihiin Kenya, Itoobiya, Jibouti iyo Uganda.
Qabashadan kullankan IGAD oo ay sidoo kale riixayso hay’adda Qaramada Midoobay ee Qaxootiga ee UNHCR ayaa waxa uu qeyb ka ahaa arrimihii ay madaxda IGAD ku heshiiyeen shir madaxeedkii Muqdisho lagu qabtay bishii September ee sanadkii la soo dhaafay
Mas’uul u hadlay urur goboleedka IGAD ayaa sheegay in xasiloonida siyaasadeed iyo amni ee ka hanaqaaday Soomaaliya iyo cadaadiska dalalka deriska ah ka haysto martigelinta qaxootiga ayaa dhiirageliyay dardargelinta dadaallada xal kama dambeys ah loogu raadinayo qaxootiga Soomaalida.
Kenya ayaa sheegtay in ay albaabada u laabayso xerada qaxootiga ugu wayn dunida ee Dhadhaab meesha lagu gaaro bisha afraad ee sanadkan, waxayna bilawday qorshe uu qaxootigu iskii dib ugu laabanayo Soomaaliya.
Balse su’aasha la isweydiinayo ayaa ah qaxootiga dib ma loogu celin karaa Soomaaliya xilligan oo dalka ay ka jiraan abaaro xooggan iyadii sidoo kalana laga cabsi qabo in ay dhacdo macaluul.
Ciidamada Puntland PSF oo mushaharkooda ugu deeqay dadka Abaarta Saameysay
Ciidamada Puntland ee loo yaqaan PSF ayaa bilaabay hawlgalo ay ugu gurmanayaan dadka reer guuraaga ah oo ay abaarta Saameysay.
Askarta ciidanka PSF oo mushaharkooda qeyb u jaray dadka abaarta saameysay ayaa deeq gaarsiiyey dadka reer guuraaga ah ee usoo hayaamay deegaano ka tirsan gobalada Bari iyo Karkaar. Deeqdan ayaa isugu jirtay Raashin iyo Biyo.
Ciidamada PSF ayaa tilaabadan qaaday xili qeylo dhaan loo wada diray dhamaan bulshada Soomaaliyeed ee laga codsaday inay u gurmadaan dadka dhibaatada kasoo gaartay abaaraha wada taabtay deegaanada Soomaalidu degto.
Gobalada Bari iyo Karkaar ayey ku sugan yihiin xiligaan reer guuraa badan oo kasoo hayaamay Waqooyiga, koonfurta iyo waliba deegaanka Soomaali Galbeed kuwaasi oo xoolahooda inta yar ee uga haray ulla soo safray ceelasha ay biyaha yar ku hareen.
Ciidamada PSF ayaa sidan oo kale horey bilihii lasoo dhaafay deeq u gaarsiiyey dadka reer guuraaga ah ee u sugan gobalka Mudug iyo Nugaal.
Puntland oo Fasaxday Furashadda Xisbiyadda Siyaasadda
Guddiga doorashooyinka kumeel-gaarka ee Puntland ayaa maanta si rasmi ah u fasaxay furashadda nidaamka xisbiyadda badan ee doorashooyinka gollayaasha degaanka Puntland
Xaflada Furitaanka oo lagu qabtay xarunta PDRC ee Caasimada Garoowe waxaa ka qaybgalay Madaxweynaha Puntland, guddoonka Baarlamaanka, masuuliyiin ka tirsan gollaha xukuumada, Guddoonka guddiga doorashadda, ururada bulshada rayidka ah, siyaasiyiin, Isimo, xubno ka socdey beesha caalamka, iyo martisharaf kale.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo ka hadlay munaasabadda ayaa ku dhawaaqay in puntland ay fasaxday furashadda iyo meelmarinta ururadda siyaasadda ee doorashooyinka gollaha degaanka, isagoo ku dheeraaday waxtarka iyo qiimaha ay u leedahay shacabka Puntland dimuquraadiyad lagu saleeyey diinteena iyo dhaqankeena wanaagsan,
wuxuu sheegay in xukuumadda uu madaxda ka yahay ay diyaar u tahay hirgalinta hannaanka doorashadda xisbiyadda Puntland isla markaana ay tahay mid lagaga baxayo habka wax lagu qayb sado iminka.
“Fadhig ku dirirka ka taga oo xisbi-ku-dirirka u gudba, dad badan ayaa lahaa dowladu daacad kama ah nidaamka dimoqraadiyadda, hadda waa furan yihiin nidaamkii xisbiyadda ee furta xisbiyo” ayuu yiri, wuxuuna sii raaciyay.
” waxaan u baahanahay in dimiquraadiyad noo shaqaynaysa aan samaysano isla markaana ay noqoto mid salka ku haysa diinteena islaamka oo aan ka hor imaanaynin, sidoo kalena ka turjumaysa, dimiquraadiyada Geedkaan rabnaa, dimiquraadiyad Geelaan rabnaa” ayuu yiri Madaxweynaha
Dhinaca kale, Goddoomiyaha kumeelgaarka ah ee guddiga Doorashadda Puntland Maxamed Soofe Xasan ayaa dhiniciisa sheegay in siyaasiyiinta doonaya inay furtaan ururo siyaasadeed ay macluumaadka la xiriira habraac doorashooyinka, xeerka ururadda siyaasadda iyo foomka diiwangalinta ay ka heli karaan xafiiska guddiga doorashadda ee Caasimadda Puntland.
Dhinac kale, Masuuliyiintii ka socotay ururadda bulshada rayidka ah ee Puntland, Hay’adaha Caalamiga ee daneeya dimoqraadiyadda ayaa soo dhaweeyay dib u bilaabida hannaanka doorashooyinka Puntland oo sanadkii 2013ka la joojiyay.
Gabagabadii, inkastoo uu madaxweynaha Puntland uu marar badan sheegay inuusan doonayn in dib loo doorto, haddana lama oga in madaxweyne Ku-xigeenka Puntland, gollaha wasiiradda iyo xubnahaha barlamaanku ay xisbi siyaasadeed furan doonaan, sidoo kaloo waxaan la sadaalin karin sida ay dadweynuhu u soo dhawayn doonaan furitaanka xisbiyadda madaama dib-u-dhacyo badan ay ku yimaadeen hanaanka doorashadda Puntland.
March 25, 2017, 2:04 pm
Daawo:Khudbad M.Siilanyo ka akhriyey furitaanka Mashruuca Kaydka Gaasta (Somgas terminal) & Waxay daaranayd
March 25, 2017, 2:03 pm
Daawo:Wefti Wasiiro Xukumada Siilanyo & Xisbiga Kulmiye isagu jira oo Jabuuti gaadhay,Ujeedada safarkooda +Gogol Geelle u dhigay….
March 25, 2017, 1:59 pm
Shirkada DP World oo biyo dhaamin ka bilaawday deegaanno hoostaga gobolka Saaxil Soomaaliland
Shirkada saddexaad ee ugu weyn aduunka dhinaca baddaha ee DP World ayaa sheegtay Jimcihii shalay in deegaannada Soomaaliland oo ay abaartu ku dhufatay ka bilaawday bixinta gargaar biyo ah oo dhan 4.5 million oo Liitar.
Qeybinta biyahan ayaa waxaa ka qeybqaadan doona 410 booyadood, waxaana lagu wadaa in la gaarsiiyo 15, 000 oo ruux oo ku dhaqan deegaanno hoostaga gobolka Saxil.
Gargaarkan ay ku deeqday shirkadda ayaa imanaya wax ka yar bil kadib markii ay la wareegtay maamulka dekeda Berbera.
In ka badan 1.6 milyan oo ruux ama 46% boqolkiiba dadka ku dhaqan Soomaaliland ayaa lagu waramayaa in ay saameyn adag ku yeelatay abaarta oo qalajisay ceelashii ay dadka ka cabi jireen, beerihii ay dadku tacbanayeen iyo xoolaha oo intooda badan dhibatay.
‘’Howlgalkan ayaa qeyb ka ah wax ka qabashada dadka gargaarka u baahan ee ku dhaqan deegaannada hoostaga gobolka Saxil. Ayuu yiri madaxa shirkadda DP World / CEO Ahmed Bin Sulayem.
Gargaarkan ayaa noqonaya biyihii ugu badnaa ee loo diro dadka ay abaarta saameysay ee ku dhaqan deegaanno ka tirsan Soomaaliland.
Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Galmudug oo lagu garaacay Cadaado
Wararka ka imaanaya magaalada Cadaado ee xarunta KMG ee maamulka Galmudug ayaa sheegaya in maanta kulan ay lahaayeen Xildhibaanada Baarlamaanka uu ka dhacay buuq kadib markii ay dagaalameen Xildhibaano katirsan Maamulkaasi.
Sida aan Wararka ku helnay Xildhibaan katirsan Baarlamaanka oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Xasan Geelle ayaa is hortaag ku sameeyay kulanka Baralamaanka, waxa uuna Xildhibaanada u diiday in ay gudaha u galaan hoolka ay ku shiri lahaayeen oo kuyaala xarunta Madaxtooyada.
Xildhibaan Geelle oo kamid ahaa Xildhibaanadii mucaaradka ku ahaa Madaxweynihii Galmudug ayaa la sheegay in uu kasoo horjeeday in kulanka Baarlamaanka uu shir Gudoomiyo Gudoomiyaha Baralamaanka Galmudug Cali Gacal Casir.
Xildhibaan kale oo katirsan Baarlamaanka Galmudug oo ka carooday ficilka uu sameenayay Xildhibaankan, waxaana la sheegay in uu dagaal la galay uuna halkaasi ku garaacay, Xildhibaan Geelle ayaa dagaalka ku waayay mid kamid ah ilkihiisa .
Ciidamada Amaanka iyo Xildhibaano ayaa markii dambe ku guuleestay in ay kala qabtaan Xildhibaanada dagaalamay, waxaana markii dambe xaalada noqotay mid caadi ah iyadoona kualnka uu u qabsoomay sidii loogu tala galay.
Labada Xildhibaan ee maanta ku dagaalamay xarunta Madaxtooyada Galmudug ayaa la sheegay in ay yihiin qaraabo ayna kasoo wada jeedaan magaalada Cadaado oo hada ah xarunta KMG uu ku shaqeeyo maamulka Galmudug.
March 25, 2017, 1:50 pm
Mareykanka oo Adkeynaya Bixinta Dal-ku-galka
Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa weydiisatay Safaaradaha iyo qunsuliyadaha Mareykanka ee caalamka in ay baaritaano dheeraad ah ku sameyaan dadka qaar marka ay dalbanayaan fiisooyinka.
Amarada kale ee la siiyey safaaradaha iyo Qunsuliyadaha Mareykanka ayaa waxaa kaa mid ah in ay dib u eegis ku sameeyaan bogaga ay baraha bulshada ku leeyihiin dadka kasoo dalbada viisooyinka ee looga shakisanyahay argagixisanimo ama inay ku noolyihiin deegaanada ay ka taliso Kooxda Daacish.
Tilmaamahan cusub ee ay waaxda arrimaha dibada u dirtay safaaradaha Mareykanka ayaa dhigaya in xitaa kuwa aanan looga shakisaneyn kooxaha argagixisada ay mari doonaan baaritaano dheeraad ah, taasoo ay ku muteysan karaan in lagala laabto dal-ku-galka hadii loo baahdo.
Adkeynta Fiisooyinka Mareykanka ayaa qeyb ka aheyd balanqaadyadi uu madaxweyne Trump kusoo galay ololihiisii doorashooyinka.
Madaxweynaha Somaliland Oo Safar Aan Hore Loo Shaacin Ugu Ambabaxay Gobollada Bari
Madaxwaynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo maanta safar ugu baxay Gobolada Bari ee Somaliland ayaa waxa uu galabta Gaadhey Magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil.
Ka dib markii uu waftiga uu hogaaminaayo Madaxwayne Siilaanyo gaadhe Magaakada Berbera waxa warbaahinta uga warbixiyey ujeedada safarka Madaxwaynaha iyo halka uu ku jihaysan yahay Afhayeenka Madaxtooyada Xuseen Aadan Cige Dayr.
March 24, 2017, 4:26 pm
← Previous 1 … 162 163 164 165 166 … 200 Next →